Owayengumfundi wokuqala esizombeka eshashalazini wumlobi ovuthiwe nongumethuli wezinkulumo ezakhayo uMnu Phumelela Msomi. Intatheli yeUKZNdabaOnline, uRaylene Captain-Hasthibeer, ikhulume naye.
UMB: Usebenzise ulwazi lwakho owaluzuza ngokwenza iziqu ze-BCom Kwezokuhlelwa Kwamabhuku Ezimali e-UKZN ukungena emkhakheni wokuba wusomabhizinisi, umlobi nomethuli wezinkulumo ezakhayo. Wenza ngani?
IMP: Imfihlo yami ilele ekufiseni. Kufanele ube nezifiso bese kuthi nsuku zonke wenze okusemandleni ukuzifeza. Kuba nezinselelo endleleni kodwa kufanele ukhumbule ukuthi zikhona ukukuqinisa ukhakhayi. Ungesabi noma ubalekele izinselelo, kepha kumele uphokophele ukuthi zikukhulise. Ngaphezu kwalokho kumqoka ukwenza into oyithandayo. Abantu abaningi benza iphutha lokujaha umholo kanti uma ulandela into oyithandayo awusoze wadumala.
UMB: Ibhizinisi lakho lokuqala wawusewumfundi e-Westville campus e-UKZN. Awuthi qaphu qaphu kwenzeka kanjani?
IMP: Nakuba ngangiwumfundi Wezokuhlelwa Kwamabhuku Ezimali kodwa ngangisebenza kanzima ukusungula nebhizinisi lezimboni. Ekhaya kwakunebhizinisi lokwakha. Ngangenza umsebenzi wokuba yiso kwezokwakha. Ngakwazi ukuthola umsebenzi, ngesekwa wonjiniyela ukwenza imisebenzi. Emva kwalokho ngasebenza ngokubambisana nenkampani enkulu yezokwakha e-New Germany, okwanginika umsebenzi wokubiya wezigigidi zamarandi. Amathuba amaningi avela kulowo msebenzi. Ibhizinisi lami manje selidayisa, lenze izimpahla zokubiya kumakhasimende asekhaya nawaphesheya.
UMB: Yisiphi iseluleko ongasinika osomabhizinisa abasafufusa?
IMP: Ukuba wusomabhizinisi akusiwo umsebenzi kodwa yimpilo yemihla ngemihla. Akusikho ukuthi ungatholani kodwa wukuthi ungaba wubani. Ngikhuthaza osomabhizinisi abasafufusa ukuthi baqale bazithuthukise bona ngaphambi kokuqala ibhizinisi. Imfihlo yokuba wusomabhizinisi wukuqale uzithuthukise wena ngoba kuthinta umnyombo webhizinisi lakho, okunguwe uqobo. Funda ukuqale uzilungise wena kunokulungisa ibhizinisi lakho; lokhu kuyokwenza izinto zibe lula ebhizinisini.
UMB: Wenza umsebenzi omningi wokusiza abantu abaswele. Sixoxele ukuthi unikela kanjani emphakathini?
IMP: Ngisungule umfundaze kanti kumanje ngifundisa abafundi ababili e-Durban High School. Ngiyanikela nasesontweni nasekuqhubeni umsebenzi wenkonzo.
UMB: Zithini izinhlelo zakho ngekusasa?
IMP: Inhloso yami wukukhulisa ibhizinisi, lifinyelele emhlabeni wonke. Ngihlela ukuxoxisana nezinhlangano, ngibhale izincwadi ukusiza abantu ukuthi bazi baphilelani. Ngaphezu kwalokho, ngihlela ukuthi kube mnandi ukwenza konke lokho.